Foibe Loharanosoa Toko telo : nahazo toeram-piompiana akoho | NewsMada
Foibe Loharanosoa Toko telo : nahazo toeram-piompiana akoho
Nomen’ny orinasa Vivo Energy Madagascar toeram-piompiana akoho ny foibe fandraisana ny kamboty Loharanosoa Toko Telo eny Anosy Avaratra miaraka amin’ny mpianatry ny Inscae, ny talata lasa teo. Ahafahana manatsara ny fiainan’ny ankizy kamboty 150 (2-18 taona) ny fametrahana ny tetikasa. Hitondra loharanom-bola ho an’ny foibe ny toeram-piompiana hividianana sakafo sy hampihodinana ny foibe.
Nanohana ny tetikasa koa ny mpianatra groupe Miahy ao amin’ny Inscae ao anatin’ny fandaharanasa fitondrantenan’ny mpitarika ka havoitra amin’ny fanatanterahana tetikasa sosialy ho an’ny mpiara-monina.
Nanamarika ny tomponandraikitry ny orinasa Vivo Energy, Razakaboana Johanne, fa laharam-pahamehana ho an’ny orinasa ny fanabeazana eto amintsika ka hampiroborobo izany ny fametrahana ny toeram-piompiana.